Tsy raikitra raha tokony ho natao ny herinandro teo ny raharaham-pitsarana mikasika ilay vono olona ka nahafatesan’ilay karana mpandraharaha antsoina hoe : Ameralli Danil Radjan, nitranga teny Ivandry tamin’ny septambra 2020. Efa tao amin’ny efitra fitsarana tetsy Anosy tamin’io fotoana io ireo efa-dahy voarohirohy amin’ity raharaha ity, dia i Lionel Lelièvre, tompona orinasa misahana fiarovana sy fiambenana, miampy lehilahy telo izay mpiasa ao amin’ny orinasa tantaniny ihany. Efa namadibadika ny antontan-taratasin’ady ny mpitsara, ary tamin’ny fotoana hanombohan’ny fifandaharana indrindra no nilaza izy fa tsy mahefa mitsara ny raharaha ny Fitsarana. Tsy nambara ny antony fa dia samy gaga teo ny rehetra. Ny hany nambaran’ny mpitsara dia hoe : mihemotra ho amin’ny volana desambra izay ankatoky ny fikatonan’ny taom-pitsarana 2021, indray ny fifandaharana.
Ny vahoaka efa nanantena hoe : hisy CSB Manarapenitra (Hopitaly Manarapenitra no Filazan’ny mponina azy) hitsangana ao amin’ny Kaominina Ampangabe, Distrika Ambohidratrimo, Faritra Analamanga. Tetikasan’ny filoham-pirenena izy io, kinanjo nihitsoka efa ho 10 volana izao ny asa, na efa nandraisan'ny orinasa mpanao azy ampaham-bola aza. « Parpaing » na ireo karazana biriky vita latsa-tsimenitra no hany hita eo amin’ilay toerana, fa tsy misy asa mandeha.
Tany iray misy eo amin'ny 2ha eo, titre "Route de Fiherenana 6ème partie" ao Anketraka, Distrikan'ny Toliara 1, Faritra Atsimo andrefana, Faritany Toliara no efa nalain'ny fanjakana nanamboaran-dalana ny taona 1964, ka efa nahazoan'ny tompony fanonerana ara-bola tanteraka. Ireo ambin'ny tany tsy nisy fotodrafitrasa kosa dia nomen'ny fanjakana ny kaominina Toliara I, ka nisy fianakaviana 11 nangataka ireo ambin-tany ireo. Nahazo alalana hanorina tamboho sy anangana fotodrafitrasa tao amin'ny toerana avokoa ireto fianakaviana ireto, izay fanomezan-dalana avy amin'ny kaominina. 30 taona aty aoriana anefa vao mipoitra ny nilaza fa mpandova ilay tany efa nahazoan'izy ireo onitra tamin'ny fanjakana, ka nitondra taratasy avy amin'ny ministeran'ny fanajariana ny tany, fa averina amin'izy ireo ny tany satria tsy nisy nanamainty molaly sy tsy nisy nanorina fotodrafitrasa (terrain nu), araka ny filazan'izy ireo, rehefa nandoa vidin-tany 2ha ao Toliara ambonivohitra amin'ny 600 000ar.
Rongony milanja 5 taonina sy 100 kg ary menaka jamala 3,5 litatra no tratra, ary nodorana tao Ambanja omaly 12 novambra. Vokatra azo tamin’ny « opération » nataon'ny Zandary nanomboka ny 12 oktobra hatramin'ny 2 novambra tany Agnalabe izy ity. Nisy rongony 200 kg hafa koa no efa nodorana tany an-toerana, talohan’izao. Niatrika ny fandoroana ireto rongony ireto ny filoha lefitry ny Antenimieram-pirenena faritanin’Antsiranana, ny Prefen’Antsiranana, ny komandin’ny Vondron-tobim-pileovan’ny Zandarimaria DIANA, ary ny solombavambahoaka sy manampahefana any an-toerana. (Jereo Sary Tohiny)
Mbola loza mitatao amin’ny fiainan’ny Malagasy an-tapitrisany maro ny tazomoka, tsy mamela ny ankizy handeha an-tsekoly sy ny olon-dehibe hanatanteraka ny asany, ary sakana lehibe ho an’ny fampandrosoana. Olona maherin’ny 450 no matin’ny tazomoka teto Madagasikara hatramin'ny fiandohan'ny taona. Nanomboka ny hetsika famendrahana odimoka ny atin-trano mba hiadiana amin’ny tazomoka ny governemanta amerikana sy ny Fandaharanasa Nasionaly Miady amin’ny Tazomoka (PNLP) an’ny Ministeran’ny fahasalamam-bahoaka, hiarovana mponina miisa 850 000 any amin’ny faritra Atsimo Andrefana sy Ihorombe.
Avotra soa aman-tsara ireo telo mianaka, zaza vao 10 volana, zazavavy 14 taona, ary ny renin’izy ireo, nalain'ny dahalo ankeriny tany Marotsipoy, Distrika Anjozorobe, rehefa nataon'izy ireo fahirano nandritry ny 10 andro katroka nanomboka ny 31 oktobra 2021. Naratra nandritra izany ny raim-pianakaviana saingy tafatsoaka. Dahalo iray no lavo nandritra ny fifandonana nanavotana an'izy ireo tao Anosivolakely Kaominina Andranomisy, Distrika Anjozorobe ny 10 novambra 2021.
Miroso amin’ny dingana lalindalina kokoa ny fanatanterahana ny tetikasa « Transport par câble », na Téléphérique eto Antananarivo. Nanomboka ny 10 novambra 2021 dia manatanteraka ny fitsirihana ambany tany na « travaux de sondage » amin’ireo toerana rehetra hametrahana ny gara sy ny andry lehibe (pylône) ny orinasa Colas. Ho an'ireo zotra roa hapetraka dia miisa 12 ny gara, ary 78 ireo andry lehibe, ka toerana miisa 15 amin'izy ireo, eo anelanelan’ny Soarano, Ambohijatovo sy Anosy no hanatanterahana ny fitsirihana aloha amin’ity taona ity. Tohizana manomboka amin’ny tapaky ny volana janoary 2022 ny sisa amin’ireo toerana hafa. Maharitra 2 na 3 andro eo ny fanatanterahana ny fitsirihana ho an’ny toerana tsirairay ka hidina hatrany amin’ny 20m na 25m ambany tany hahatrarana ny vato any ambany izany (substratum rocheux), mba hahafahana mamaritra ny fototra hapetraka aoriana, ary indrindra hisorohana ny loza rehetra mety hitranga amin’ny lafiny ara-jeolojika.
Hiatrika fitsarana etsy amin’ny Fitsarana momba ny ady heloka bevava Anosy ny alakamisy 11 novambra 2021 ireo efa-dahy voarohirohy amin’ny famonoana an’i Danil Radjan. Efa nafahan’ny Fitsarana izy efatra ireo saingy naverina any am-ponja avy hatrany indray vao nivoaka ny lapan’ny Fitsarana Anosy taorian’ny nivoahan’ny didy, araka ny toromariky ny minisitry ny Fitsarana teo aloha. Hifanatri-tava manoloana ny Fitsarana indray izany i Lionel Lelièvre sy ny fianakavian’i Radjan. Leziônera frantsay teo aloha, lasa mpandraharaha ara-toekarena eto Madagasikara misehatra eo amin’ny lafiny fiambenana sy fiarovana itsy voalohany, no voampanga ho atidohan’ny famonoana an’i Danil Radjan, avy amin’ny fianakaviana Radjan. Efa notsaraina ity raharaha ity tamin’ny jona 2021, ary dia nafahan’ny Fitsarana i Lionel Lelièvre sy ireo Malagasy telo lahy voarohirohy niaraka taminy, noho ny tsy fisian’ny porofo mamatotra azy ireo.
Drakaka milanja 227kg nokasaina alefa any Toamasina no tratran'ny mpanara-mason'ny jono tao amin'ny toeram-piantsonan'ny taxi-brousse ao Morondava Centre ny 8 novambra lasa teo. Avy ao amin’ny Kaominina Bemanonga no niavian'ireto drakaka ireto, ary olon-tsotra tsy mpisehatra amin'ny jono an-dranomasina, ary tsy manana karatra ara-dalàna no nitondra azy. Naverina avy hatrany tany anaty ala honko ireo drakaka ireo araky ny lalàna mifehy ny jono. Marihana fa mikatona nanomboka ny 16 oktobra hatramin'ny 15 desambra ny taom-panjonoana hazandranomasina, ary tafiditra ao anatin'izany ny fangalana sy fanondranana drakaka. (Jereo Sary Tohiny)
Nahitana taolam-paty tao amin’ny Fokontany Ambalanomby, Kaominina ambanivohitr’i Morondava androany. Efa potika ireo taolana hita tao anaty gony ny alain'ny Alatsinainy teo. Raha ny tombana nataon’ny Médecin Inspecteur sy ny Polisy ary ny mpiasan’ny Kaominina Morondava nanao ny fizahana dia mety taolam-paty narian’olona efa ela izy ireo. Nalevina taorian’ny fizahana sy fanamarinana natao. (Jereo Sary Tohiny)